६७ वर्षमा एसईई परीक्षा दिँदै गरेकी आमा लाइभ ! बेवारिसे बिरामीको अस्पतालभित्रै उपचार नपाई ज्यान गयो (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
६७ वर्षमा एसईई परीक्षा दिँदै गरेकी आमा लाइभ ! बेवारिसे बिरामीको अस्पतालभित्रै उपचार नपाई ज्यान गयो (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Mar 23, 2019
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३५६ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यसका साथै विभिन्न विशेष व्यक्तित्वहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
१. मृत्युको मुखमा पुग्दा पनि बेवारिसे विरामीले सरकारी अस्पतालमै उपचार पाउँदैनन् !
काठमाडौं । विहीबार हाम्रो टिम वीर अस्पतालको इमरजेन्सीमा पुग्दा एक बेवारीसे बिरामी यो कुनामा बोरा ओछ्याएको शैयाबाट जिवन मरणको दोसाँधमा बाँच्ने संघर्ष गर्दै थिए । उनलाई मंगलबार प्रहरीले बेवारीसे अवस्थामा भेटेपछि उद्धार गरेर वीर अस्पतालको इमरजेन्सीमा ल्याइपु¥याएको थियो । नेपाल सरकारको अस्पतमालमा भर्ना गर्दा आफन्त चाहिने नियमकै कारण यी व्यक्तिको अस्पतालले भर्ना लिएको थिएन । आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामी बोराको शैयामा थिए । हामी शुक्रबार पुनः उनको अवस्था बझ्न पुग्दा उनको निधन भैसकेको थियो ।
२. स्थानीय निकायको लापरवाहीका कारण अस्पतालको कन्तविजोग !
बुटवल । बुटवल स्थित लुम्बिनी अञ्चल आयुर्वेद अस्पताल सरोकारवाला निकायको वेवास्ताको कारण राम्ररी सेवा दिन सकिरहेको छै । यस अघि आयुर्वेद विभागले हेर्दै आएको भएपनि संघीय संरचनामा गैसकेपछि अहिले प्रदेश न ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा छ । तर विगत ५ महिनादेखि अस्पतालमा कुनै पनि आयुर्वेदिक औषधि छैन ।
३. ठेकेदारले ज्यामी काम गरेको पैसा नै दिदैनन्, प्रहरीले कुरै सुन्दैन
काठमाडौं । उदयपुरका गणेश श्रेष्ठ आफूले काम गरेको पैसा ठेकेदारले नदिएपछि न्याय खोज्दै काठमाडौं आए । सिन्धुपाल्चोकमा ठेकेदार मन्सु मिंयाले उनी र उनकी श्रीमती निलम श्रेष्ठले काम गरेको १ लाख ७० हजार रुपैया दिएनन् । बिहानैबाट सुरु भएको उनको इट्टा बोक्ने, सिमेन्ट बालुवा बोक्ने, मसला बनाउन काम राति बत्ति बालेर समेत हुन्थ्यो । तर त्यही काम गरेको पैसा नपाएपछि उनी एकदमै दुखी छन् ।